के तपाई पनि त्यस्तै मुर्ख हुनुहुन्छ? : मार्टिन Vrijland
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	2 सेप्टेम्बर 2019 मा	•7टिप्पणिहरु
के तपाई पनि त्यस्तै मुर्ख हुनुहुन्छ? के गर्ने? साधारण तथ्यको बारेमा कि तपाईका वरपरका सबैले अझै पनि विश्वास गर्छन् कि राजनीति एक विश्वसनीय कुरा हो। मानिसहरू वास्तवमै प्रजातन्त्र अवस्थित छ भन्ने सोच्दछन्। तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ:खैर, म पनि विश्वास गर्छु। यो जहिले पनि यो जानु हुँदैन मार्गमा हिँड्न सक्छ, तर हामी वास्तवमै प्रजातन्त्रमा बाँचिरहेका छौं"। के म तपाईंलाई बाँकी नेदरल्याण्ड्सको साथ नरम तातो बालुवामा आफ्नो टाउको राख्न जारी राख्न अनुरोध गर्न सक्छु? वा तपाइँ अझै अझै एक सानो पढ्न को लागी, तपाइँको अप्रत्याशित जिज्ञासा को कारण?
यो वास्तवमै यस संसारलाई हेर्ने समय हो। तपाईंको विश्व दृश्य पूर्ण रंगीन छ। पालनाबाट 'यहाँ र अहिले' सम्म तपाईं एक विश्वदृश्यको साथ प्रोग्राम हुनुहुन्छ जुन गलत छ। यो तपाइँको आमाबुवासँग सुरू हुन्छ जसले आफैले प्रोग्राम गर्नुभएको छ र तपाइँको प्रोग्रामि transferred्ग तपाइँमा हस्तान्तरण गरेको छ। हुनसक्छ तिनीहरू सायद उनीहरूको परम्परागत चर्च वा राजनैतिक पार्टीको विरुद्धमा विद्रोही थिए। हुनसक्छ तिनीहरू आफैले PvdA बाट ग्रुनेललिंक्समा बदल्छन् वा तिनीहरू वास्तविक हिप्पीहरू हुन सक्छन्।
तपाईको सबै जीवन एक विश्वदृश्यको साथ प्रोग्राम गरिएको छ जुन शिक्षा, मिडिया, संगीत, चलचित्र, पत्रिका, रेडियो, इन्टरनेट, फेसबुक, र अन्य द्वारा निर्धारित गरिन्छ। यदि तपाई सोच्नुहुन्छ भने:हो, यो बुझ्छ। हामी सबै एकै संसारमा बाँचिरहेका छौं, यसैले हामी सबैले अधिक वा कम समान चीजहरू देख्छौं। अधिकमा फरक कोणबाट; यदि तपाइँ अर्कै देशमा जन्मनुभएको भए, तर हामी सबै एकै संसारमा बाँचिरहेका छौं"। यो समय हेर्नको लागि यो हुन सक्छ कि तपाईंको आँखा र कानले तपाईंको जीवनमा अवशोषित गरेको सबै कुरा केवल एक तुलनात्मक सानो समूह द्वारा निर्धारित गरिन्छ। हुनसक्छ लाखौं व्यक्तिहरू त्यो सानो क्लबको लागि काम गर्छन्, तर ती लाखौं व्यक्तिहरू उनीहरूको काममा निर्भर छन् र तिनीहरू सबै यति सानो भागमा काम गर्छन् कि तिनीहरूले ठूलो चित्रलाई वेवास्ता गर्दैनन्। तर सबै भन्दा माथि तिनीहरू आफैंलाई सानै उमेरदेखि नै प्रोग्राम गरिएको छ कि उनीहरूलाई राम्रो ज्ञान छैन र तपाईंजस्तै यस सामूहिक झूटा वास्तविकतामा विश्वास गर्नुहुन्छ।
तपाईं सायद पनि विश्वास गर्नुहुन्छ कि शाही घरहरूले भन्नको लागि केहि छैन। "शाही घरहरू केवल औपचारिक हुन्। उनीहरूसँग महत्त्वपूर्ण मार्केटिंग फंक्शन छ, किनकि तिनीहरू कहिलेकाँही अर्को ट्रेड ट्रेड मिसनमा जान्छन् र त्यसपछि ठूला कम्पनीहरूबाट मनिजरहरूलाई ठूला सम्झौताको साथ फिर्ता लिन लैजान्छन्। तिनीहरू यसमा धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। ती वास्तवमै हाम्रो देशको लागि धेरै उपयोगी छ।'मैले डच राजपरिवारको तपाईंको छवि राम्ररी वर्णन गरे? यदि तपाईं महिला हुनुहुन्छ भने तपाईंले सेन्डोला र सेतो घोडामा राजकुमारको सपना देख्नुभयो होला, र तपाईंको आमाले सुन्तलाको गाडी र प्रिन्स डे टिभीमा सुन्तलाको ग्लासको साथ देख्नुभयो होला। के म अझै पनि निम्न बारम्बार रिपोर्ट गर्न सक्छु? तपाईं वास्तविकतासँग पूर्ण नमिल्ने छविको साथ प्रोग्राम हुनुहुन्छ।
प्रत्येक एजेन्ट, वकिल, सिपाही, सिभिल सेवकाई, न्यायाधीश, मन्त्री, असाधारण अनुसन्धान अधिकारी (BOA) - र यस्तै अन्यले - मुकुटमा बफादारीको कसम खान्छ शाही परिवार मा। कसको हस्ताक्षर सबै कानून अन्तर्गत छ? हो, त्यो राजाको। "हो, तर ती कानूनहरू प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाहरू मार्फत बनेका हुन्छन् र यसका बारे धेरै छलफल हुन्छ र अन्ततः तपाईं केहि त्यस्तो चीज ल्याउनुहुनेछ जुन ठूला राजनीतिक दलहरू बीचको सम्झौताको आधारमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। र ती पार्टीहरु चुनाव परिणाम पछि जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्दछ"। तपाई अझै पनी विश्वास गर्नुहुन्छ, हैन? तपाईको उमेर कति हो कतिवटा सरकार तपाईंले पहिले देख्नुभयो? तर तपाईं अझै यो विश्वास गर्नुहुन्छ?
के तपाइँ यो पनि विश्वास गर्नुहुन्छ कि रेडियो र टिभीमा जेरोन पाउ, ईवा जिनेक वा DWDD जस्ता छलफलहरू पूर्ण रूपमा प्रामाणिक छन्? तपाईं विश्वास गर्नुहुन्न कि यसले केहि थोरै मार्गदर्शनमा डो lead्याउन सक्छ? तपाईंलाई पक्का थाहा छ कि टेबलमा रहेका ती मानिसहरू त्यहाँ मिसनमा छैनन् र कुराकानी केवल आलोचनाको उपस्थितिलाई समर्थन गर्न वा छलफललाई साँचो कुञ्जी प्रश्नबाट बदल्नको लागि मात्र हो?
हामी स्वीकार्य रूपमा धेरै परिष्कृत छौं, मैले स्वीकार्नु पर्छ। उदाहरणका लागि, मलाई थाइरी बाउडेट फोरम फर डेमोक्रेसी (एफभीडी) को उदयबाट थाहा भयो कि यो शक्तिशिक्षित शक्ति हो। धेरै जसो एक धेरै विश्वसनीय विरोध हुन सक्छ। जब तपाईं टिभीमा एक छलफल कार्यक्रम देख्नुहुन्छ, तपाईं साच्चिकै सोच्नुहुन्छ कि यो प्रामाणिक छ र अन्ततः त्यहाँ कोही छ जो गम्भीर आलोचना गर्न हिम्मत गर्दछ। मेरो छातीमा चोट पुर्याउने होइन, तर म तपाईंलाई यो दृष्टान्तको रूपमा मात्र भन्दैछु। जे भए पनि मैले भविष्यवाणी गरिसकेका थिए कि एफभीडीको उदय केवल र केवल समाजमा आलोचनालाई उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो, यसलाई 'सही, षड्यन्त्रवादी सोच, राष्ट्रवाद र महिला-मित्रता' लाई जोड्दै, र बमलाई हावामा राख्नु हो। डबल तल्लो सक्रिय गर्न। हामी हाल विश्वव्यापी रूपमा उही प्रक्रिया देखिरहेका छौं। पहिले पढ्नुहोस् यो लेख राम्रोसँग।
"एकदम राम्रो Vrijland, ती सबै आलोचना, तर हामीले के गर्नु पर्छ?"यदि तपाईं मलाई सोध्नुहुन्छ र सुरु गर्न भने, यो त्यस्तो समय हो जुन तपाईं वास्तवमै देख्न थाल्नुहुन्छ कि विश्वको तपाईंको छवि केवल पूर्ण रूपमा बाह्य र color छवि हो: प्रोग्राम गरिएको छवि। "हो, राम्रो र !? म यस संसारमा बस्छु, त्यसोभए के मतलब छ?"हो, यो सार्थक छ, किनकि हामी सबैले प्रोग्रामिंग गर्यौं। के यसको मतलब यो राम्रो छ भन्ने हो? "हो, तर म म्याभेरिक पनि हुन चाहन्न। मलाई बाँकीसँगै भाग लिन दिनुहोस्!"तपाईं सक्नुहुन्छ, तर के तपाइँ संसारले राम्रो गरिरहेको छ भन्ने छाप छ? म ती राम्रा पार्टीहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको छैन जुन तपाई गर्मी मौसममा भ्रमण गर्नुहुन्छ र त्यो राम्रो2हप्ताको छुट्टी र त्यो सबै बियर र त्यस्तै। म करहरू, वातावरण, युद्ध, रोगहरू र यस्तै अन्य भुक्तानको सन्दर्भमा विश्वव्यापी चलनको बारेमा कुरा गर्दैछु। के तपाई सोच्नुहुन्छ कि परिस्थितिहरू राम्रोसँग चलिरहेको छ र नेदरल्याण्ड्स पक्कै पनि राम्रो संरचनाको साथ सुन्दर देश हो।
हो, हुनसक्छ तपाईं त्यस विश्वास प्रणालीमा हुनुहुन्छ:हामीसँग डचहरूसँग युरोपको सबै भन्दा राम्रा सडक नेटवर्कहरू छन्। हामीसँग धेरै राम्रा नियमहरू छन्, उदाहरण को लागी निर्माण मामिला, राम्रो सामाजिक सुरक्षा जाल छ र हेरचाह को एक उत्कृष्ट गुणवत्ता को स्तर। हामी राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमी हौं र राजनीति र लेखा उत्कृष्ट छ"। म वास्तवमा अपेक्षा गर्दिन (यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ भने) कि तपाइँ यहाँ साईटमा समाप्त हुनुभयो, तर तपाइँ त्यो पाठक हुन सक्नुहुन्छ। वास्तवमै यो विश्वास गर्नेहरू प्राय जसो अन्तिम भेटघाट गर्नमा सबैभन्दा ठूलो कठिनाई हुन्छ र नेदरल्याण्ड्सका धेरै मानिसहरू एन्टिडिप्रेसन्ट्सबाट पीडित छन्, तर केहि गलत हो भनेर मान्यता पाउँदा गर्व 'सबैभन्दा आदर्श दासहरू' को प्रमाण हुन सक्छ। यद्यपि थकावट नजिकै छ: ​​हामी प्रिन्सको दिनमा सुन्तला झण्डा फहराउँदै गर्छौं र हामीमा त्यस्तो विश्वास छ जुन हामीमा यति धेरै तनाव छ।
सब भन्दा छोटो सारांश जुन म तपाईंलाई दिन सक्छु, जुन तपाईंलाई वास्तवमै तपाईं मार्फत जानु आवश्यक पर्दछ, हो:
तपाईंको विश्वदृष्टि सानो समूहले र colored्ग लिएको छ जसमा सबै शिक्षा र मिडियामा शक्ति छ र लोकतन्त्रको नाममा छनौट स्वतन्त्रताको भ्रम हो। राजनीतिज्ञहरू सबै राम्रा प्रशिक्षित अभिनेता हुन् जसले समाजको आवश्यकता र रुचिलाई कसरी उत्तर दिने भन्ने कुरा जान्दछन्। मिडियाले ती स्वादहरूलाई रंग गर्न र तिनीहरूलाई वर्गीकृत गर्न मद्दत गर्दछ। मिडिया र सोशल मिडिया त्यहाँ छन् तपाईको धारणा लाई मार्गदर्शन गर्न र भोट हाल्नु भनेको प्रभावकारी प्रविधिको प्रभावकारी तरीकाले कसरी काम गर्छ भन्ने उपायबाट अरु केही होइन। सोशल मिडियामा पनि 'पुनःभियर्स' को सम्पूर्ण सेनाले अनुगमन गरेको छ जुन सम्भवतः भूतपूर्व GDR मा Inofizieller Mitarbeiter को हकदार हुनेछ। फेसबुक र ट्विटर प्रतिक्रियाहरू प्रायः त्यो सेनाद्वारा नियन्त्रण गरिन्छ, जुन पछाडि लुक्छ डीपफेक प्रोफाइलहरू। तपाईंको विश्वको छवि मिडिया, म्यागजिनहरू, रेडियो, टिभी, फिल्महरू, संगीत, आदि द्वारा पूर्ण समयमा रंगीन छ। तपाईं एक मा बस्नुहुन्छ सामूहिक Trumanshow; गलत वास्तविकता।
"म त्यहाँ भ्रिजल्याण्डमा विश्वास गर्दिन। त्यो मेरो लागि पनि निराशावादी छ। तपाईं मलाई भन्दै हुनुहुन्न कि धेरै मानिसहरू झूटमा भाग लिन्छन्"। ती व्यक्तिहरू जान्दैनन् कि उनीहरू सहयोग गर्दैछन्, किनकि तिनीहरूले मात्र सानो सानो सब-क्षेत्र भर्छन् र तिनीहरू मध्ये कुनैले पनि ठूलो चित्रको निरीक्षण गर्दैनन्। यदि तपाईं वास्तवमै यसको गहिराइमा जान सक्नुहुन्छ (उदाहरणका लागि यस वेबसाइटमा लेखहरू मार्फत), तब तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ कि तपाईंको विश्व दृश्य ज्यादै ठूलो रूपमा गलत थियो। सतर्क रहनुहोस्, किनकि तपाईंलाई सत्य समुदायको सुरक्षा जालमा पनि आकर्षण गर्न सकिन्छ। विश्वलाई नियन्त्रण गर्ने शक्तिको सानो ब्लकको पनि यसको जेबमा विपक्ष हुन्छ। "विपक्षी नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका यो आफैलाई नेतृत्व गर्न होउनीहरुको क्रेको हो मैले वर्णन गरेँ, अरू चीजहरूका साथै यो लेख.
यदि तपाईंले नीलो लिंकहरू अन्तर्गत लेखहरू पढ्न समस्या भोग्नु भएको छ (ती केवल4हुन्), तब हामी यो प्रश्नमा आउनेछौं कि हामीले कसरी संसारलाई हेर्नु पर्छ। यथार्थ वास्तविकता कसरी निर्माण हुन्छ यदि निष्कर्ष सही छ कि हामीलाई यस प्रकारको सपनाको संसारमा राखिएको छ? मैले त्यस विषयमा धेरै लेखहरू लेखेको छु, तर तपाईले हालसालै तपाईको हालको जीवनको लागि जीवन बचत जानकारी शीर्षक अन्तर्गत पाउनुहुनेछ। यो लिङ्क। म तपाईंलाई भन्न चाहान्छु कि मैले यी सबै प्रयास बिना कुनै चासो बिना तपाईलाई दर्साउन गर्दैछु। यसले मेरो जीवनमा धेरै खर्च पनि गर्यो। यसको पछाडि कुनै धार्मिक प्रेरणा छैन (म विश्वास गर्छु कि धर्म दिमाग नियन्त्रण हो) र यसको पछाडि कुनै वित्तीय प्रेरणा छैन। म यो गर्दछ किनकि मलाई लाग्छ कि वास्तवमा परिवर्तनको यो एक मात्र तरीका हो। तसर्थ, निलो लिंक अन्तर्गत लेखहरू पढ्नुहोस् र मलाई तपाइँ के सोच्नुहुन्छ सुन्न दिनुहोस्।
सरकार र मिडियामा पत्र खोल्नुहोस्: जनताको अदालतमा सामूहिक इस्तीफे र अभियोजन
लकडाउनबाट ओपनअप सम्म! हामी प्रोग्रामिंग रिभर्स गर्नेछौं
विक्टर मिड्स नयाँ वर्ष विशेष व्याख्या गरियो र तपाइँ कसरी यस्तो मनिन्द * ck गर्न को लागी दैनिक गर्नुहुन्छ
ट्याग: विशेष, औसत, राजनीति, Trumanshow, गलत वास्तविकता
2 सेप्टेम्बर 2019 मा 23: 45
अर्को स्पष्ट राम्रो लेख, मार्टिन। म यसको साथ पूर्ण सहमत छु। त्यसैले ट्विटर र एफबी मा साझा गरियो।
3 सेप्टेम्बर 2019 मा 00: 35
लोकतन्त्र एक धोखा हो।
3 सेप्टेम्बर 2019 मा 08: 59
हुनसक्छ यो पहिचान गर्नु पहिले राम्रो छ कि ब्रिटेनमा जस्तै हाम्रो राज्यको रूप लोकतन्त्र होइन तर संवैधानिक राजतन्त्र हो। यसमा राजा / रानीको भूमिका छ। एउटा राम्रो उदाहरण बेलायतमा छ जहाँ जोनसनले कथित रूपमा संसदीय निलम्बनको लागि अनुरोध गरेको थियो। यो अवस्था हो वा यो परिदृश्य हामीलाई रंगीन छ? हुनसक्छ संविधान लागू गरिएको छ जहाँ तथाकथित प्रधान परिषदले संसद स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। यो हामीसँग प्रस्तुत गरिएको भन्दा एक बढी यथार्थवादी परिदृश्य हो।
जहाँसम्म मार्टिनले सम्पूर्ण थियेटरको वर्णन गर्दछ तर सही छैन, तर अझै ……। मैले सोचे कि यो एउटा उदाहरण हो जसमा हामी सबैलाई एक चित्रको साथ प्रस्तुत गरिन्छ जुन कहिलेकाँही असत्य हुन सक्छ।
3 सेप्टेम्बर 2019 मा 09: 36
यो साबुनको भाँडो हो।
ब्रसेल्सको सिंहासनमा को बसिरहेको छ हेर्नुहोस् (यस वेबसाइटमा खोजी क्षेत्र मा 'Ursula' प्रविष्ट गर्नुहोस्)।
अभिजात वर्गले नियम बनाउँदछ र लोकतन्त्र (स्पष्ट विरोधाभास) मिडिया (प्रचार मेशिन) र अभिनेताहरु द्वारा बेचेको पछाडि लुकाउँदछ जुन हामीले 'राजनीतिज्ञ' भन्ने गर्छौं।
ब्रेक्सिटले मात्र बाँकी युरोपलाई देखाउन थाल्यो कि विश्वव्यापीकरण विरोधीले दुःख र आर्थिक सजाय निम्त्याउँछ र पौंड र यूरोलाई समान तहमा पुर्‍याउँछ।
खेल केहि समयको लागि प्ले गरियो: विश्वसनीयताको लागि।
जॉनसन केही समयको लागि हार्डलाइनर हुन सक्छ।
यो अभिनय बाहेक अरु केहि छैन।
3 सेप्टेम्बर 2019 मा 16: 25
3 सेप्टेम्बर 2019 मा 23: 17
तिनीहरू प्रत्येक पटक के गर्छन् हामी यसलाई स्वीकार गर्नेछौं भन्ने आशामा बल फ्याँक्नु हो। हामीले भर्खरका पुस्ताहरूमा यति धेरै स्वीकार गरेका छौं कि अब हामी असमान र अनुचित संसारमा बाँचिरहेका छौं।
जब सम्म सिपाहीहरू (आत्माको लागि ग्रीक बेच्ने) उनीहरूको (धार्मिक) राजाको लागि झगडा गरिरहेका हुन्छन्, युद्ध जारी रहनेछ। यी पीडितहरू हुन् जसले नकारात्मक उर्जा उत्पादन गर्छन्। स्मारक विधीहरूमा भाग लिने छैन, यहाँ र अहिले तपाईंको ऊर्जा केन्द्रित गर्दै।
चाल (भ्रम) जुन हामी पतन गर्छौं विगतमा अड्कियो। यसलाई पाप, समयको पाप भनिन्छ
4 सेप्टेम्बर 2019 मा 08: 23
ठिक छ कि हामी एउटा प्रजातन्त्र हो जुन म लामो समय सम्म विश्वास गर्दिन, हामी आपराधिक राज्यमा बाँचिरहेका छौं।
« BREAKING: कायाकल्प गोली एक तथ्य हो! 80 वर्षको मान्छे जनावरहरूमा परीक्षण पछि पहिलो पटक निल्छ
ब्रेक्सिट पछाडि सँधै एक पूर्व योजना बनाइएको छ »
कुल भ्रमण: 4.204.500